Ikhaya » Iindaba kunye neehotele » Iihotele zaseOvolo zibhengeza umgaqo-nkqubo omtsha wokusebenzisa kuphela amaqanda angenazindlu
Iihotele zaseOvolo zibhengeza umgaqo-nkqubo omtsha wokusebenzisa kuphela amaqanda angenazindlu
Ngaphandle kokuqhambuka kwe-COVID-19, inkampani yokubuka iindwendwe eseHong Kong iyaqhubeka nokuqhubela phambili intlalontle yezilwanyana kuthengiso lwayo
Phantse zonke iimveliso eziphambili zokubuk 'iindwendwe zizinikele ekuthengeni kuphela amaqanda angenazindlu
Umzi mveliso weqanda unyusa ngokukhawuleza imveliso yala maqanda ukufezekisa iimfuno ezandayo
Ngaphezulu kwamazwe angama-30 akuvalileyo ukusetyenziswa kweekheji zebhetri kumzi-mveliso weqanda
Iihotele zaseOvolo ezizinze eHong Kong zibhengeze umgaqo-nkqubo omtsha wokuthenga kuphela amaqanda angenazindlu kuzo zonke iipropathi zayo, ezikhoyo eHong Kong nase-Australia, ekupheleni kuka-Matshi. Nangona ishishini lokubuka iindwendwe lichaphazeleke kakhulu kukuqhambuka okuqhubekayo kwe-COVID-19, i-Ovolo iye yazibophelela ekuphuculeni ukhuseleko lokutya kunye nentlalontle yezilwanyana kunikezelo lwayo. Inkampani yeyesine ehotele esekwe eHong Kong ukuzibophelela ekusebenziseni kuphela amaqanda angenazintambo kwihlabathi liphela; Idibanisa iihotele zaseLangham, iihotele zePeninsula, kunye neMandarin Oriental, nganye kuzo izibophelele ekusebenziseni amaqanda angenazintambo kwihlabathi liphela ngowama-2025.
“Njengokuqhubekeka kokuzinikela kwethu ekufumaneni izinto ezinokuthenjwa kwaye sikholela ezolimo nakwezempilo, Iihotele zeOvolo uzibophelele ekuthengeni kuphela amaqanda angenazindlu. Eli lelinye inyathelo kwicala elifanelekileyo kwaye liwela ngokugqibeleleyo ngokuhambelana neenjongo zethu zonyaka wethu we-Veg. Njengokuba sisiya phambili, sizakuqhubeka nokuzama iindlela zokuphucula nokwenza izigqibo ezinokuba negalelo elililo nelilungileyo kwihlabathi, ”utshilo uJuan Gimenez, uManejala weF & B yehotele iOvolo.
"Sisincoma isigqibo sehotele iOvolo sokutshintshela ekuthengeni amaqanda angenazindlu, kuphela ezakunceda ukukhusela intlalo-ntle yezilwanyana kunye nokuqinisekisa ukhuseleko lokutya," utshilo uLily Tse, uManejala weNkqubo yeLever Foundation, umbutho ongekho phantsi kukaRhulumente oye wasebenza no-Ovolo kulomba. “Ukutshintshela kumaqanda angenazo ikheyiji kunefuthe elincinci kwiindleko zokutya zizonke ngelixa kuqinisekiswa umgangatho ophezulu kunye nozinzo. Ngenxa yoko, inani leenkampani ezibuka iindwendwe kunye nezokutya ezithembisa ukusebenzisa amaqanda angenazindlu sele likhule kakhulu, kwaye siqhwabela izandla iihotele zaseOvolo ngokuzibandakanya nelo qela. Sikhuthaza ezinye iihotele zasekuhlaleni kunye neenkampani zokutya ukuba ziluthathe olu hlobo lweshishini ngokubanzi ngokubhekisele kumaqanda angenazindlu.
Ngazo zonke iimveliso ezikhokelela ekubukeni iindwendwe kunye namakhulu ezinye iinkampani zokutya ezizinikele ekuthengeni kuphela amaqanda angenazindlu, umzi mveliso weqanda uyanda ngokukhawuleza kwimveliso yala maqanda ukuhlangabezana nemfuno ekhulayo. Inani elandayo leempawu zamanye amazwe zokubuk 'iindwendwe ezisebenza eHong Kong zijoyine intshukumo yeqanda engenazindlu, kubandakanya iiLangham Hotels, Mandarin Oriental, Peninsula Hotels, Four Seasons, Marriott, InterContinental, Wyndham, Hilton, Choice Hotels, Hyatt, nabanye abaninzi .
Amaqanda aveliswe kwiinkqubo "zebhetri yebhetri" abeka umngcipheko okhuselekileyo wokutya kwimpilo yabantu kwaye abangele inkohlakalo yezilwanyana. Inani lemibutho ekhusela izilwanyana, kubandakanya noMbutho waseHong Kong othintela inkohlakalo kwizilwanyana, ukugxekile ukusetyenziswa kweekheji kwiinkukhu ezibekela amaqanda ngenxa yokubandezeleka okukhulu okukubangelayo. Ngaphezulu kwamazwe angama-30 akuvalileyo ukusetyenziswa kweekheji zebhetri kumzi-mveliso weqanda.